News Collection: आर्यनले छाडेछन् हार्डड्रीक्स !
आर्यनले छाडेछन् हार्डड्रीक्स !
सम्भवतः मदिरा पिउने हिरोहरुमध्ये अग्रपंक्तिमा दरिन्छन् आर्यन सिग्देल । मदिराकै कारण थुप्रै डिस्को, होटल र सार्वजनिक स्थानमा उनले घटना गराएका छन् । जमघट र पार्टीमा उनको प्रिय पेय पनि मदिरा नै हो । एउटा अखबारमा खुकुरी रम पिउँछु भनेर चर्चा बटुलेका आर्यन मदिरामा मस्त हुन्छन् र मदिरा सामु अरु बिर्सिदिन्छन । तर यतिबेला यी महंगा हिरोले हार्डड्रीक्स छाडेको बताएका छन् । हेल्थ-कन्सस हुन थालेको र हार्डड्रीक्स छाड्न सबैले दबाब दिएपछि आर्यनले कडापेय पिउन छाडिदिएका हुन् ।
मदिराकै कारण चर्चामा आइरहने आर्यनले हार्डड्रीक्स छाडेको कुरालाई उनका फ्यानहरुले पत्याउलान नपत्याउलान आफ्नो ठाउँमा छ तर आर्यनले जे गरे राम्रै गरे । उनका निकटवर्तीका अनुसार आर्यन हिजोआज हेल्थ कन्सस हुन थालेका छन् र आहारामा पनि विशेष ध्यान दिन्छन् । पार्टीहरुमा पनि हार्डड्रीक्सबाट टाढै हुन थालेका छन् । अपकमिङ प्रोजेक्ट 'काठमाण्डू नाइट'का लागि टसन-लुकमा देखापर्नुपर्ने भएकाले आर्यनले हार्डड्रीक्स छाडेका हुन् कि भन्ने अड्कल पनि काट्न थालिएको छ ।
जुनसुकै प्रीमियर र पार्टीमा पुगेपनि हार्डड्रीक्स ट्क्राउने चलनलाई आर्यनले रुचाउन छाडेका छन् । जाडोमा शरिर तताउन पनि हार्डड्रीक्स लिनैपर्छ भन्ने पूर्वमान्यताका विरोधी पनि भएछन् उनी । जेहोस् आर्यनको हेल्थ कन्ससबाट अन्य सेलिव्रेटीले पनि सिक्नु जरुरी छ । खासगरी मदिराको सेवनले ज्यान गुमाइरहेका प्रँविधिकहरुले आर्यनबाट सिक्नु जरुरी छ । तर आशंका पनि छ -आर्यनले मिडियालाई हार्डड्रीक्स छाडेको गफमात्र दिएका हुन् कि छाडेकै हुन् ?